Ampiharo Indian Visa Online, Application Form
Ampiharo Indian Visa Online
Fampiharana Indiana Visa
Governemantan'i India dia namoaka fahazoan-dàlana elektronika na e-Visa ho an'i India izay ahafahan'ny olom-pirenena 180 mandeha mankany India tsy mila fitomboka ara-batana amin'ny pasipaoro.
Ny e-Visa dia visa navoakan'ny Governemanta Indiana ho an'ireo mpandeha izay maniry hitsidika an'i India ho an'ny fandraharahana sy fizahan-tany.
Dika elektronika an'ny Visa nentim-paharazana izy io, izay hotehirizina ao amin'ny findainao (smartphone na tablette). Ny e-Visa dia ahafahan'ny vahiny miditra ao amin'ny firenena tsy mila manahirana mihitsy.
Karazana e-Visa Indiana
Misy karazana e-Visa Indiana isan-karazany ary ny 1 tokony hangatahinao dia miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihanao any India.
Raha mitsidika an'i India ho mpizahatany ianao amin'ny tanjona fitsangatsanganana na fialamboly, dia ity no e-Visa tokony hangatahinao. Misy karazany 3 ny Visa Indiana mpizahatany.
The Visa 30 mpizahatany India, izay mamela ny mpitsidika hijanona ao amin'ny firenena 30 andro aorian'ny datin'ny fidirana miditra amin'ny firenena ary a Visa fidirana indroa, izay midika fa afaka miditra ao amin'ny firenena in-2 ianao ao anatin'ny fe-potoana manankery ny Visa. Ny Visa dia manana a Lany daty amin'ny, izay daty alohan'ny hidiranao amin'ny firenena.
Raha mitsidika an'i India amin'ny tanjon'ny orinasa na varotra ianao, dia ity no e-Visa tokony hangatahanao. Izany dia manankery mandritra ny 1 taona na 365 andro ary a Visa fidirana misimisy. Ny sasany amin'ireo antony hanaovana fangatahana Visa Indiana e-Business mety misy:
manatrika fivoriana ara-barotra toy ny fivoriana ara-teknika na fivoriana fivarotana
ny fivarotana na fividianana entana sy serivisy any India
manangana orinasa indostrialy na fandraharahana
mandray anjara amin'ny varotra sy ny varotra sy ny fampirantiana
ary tonga eto an-tanindrazana amin'ny maha manam-pahaizana na manam-pahaizana manokana amin'ny tetikasa ara-barotra sasany.
Raha mitsidika an'i India amin'ny maha-marary anao ianao mba hahazo fitsaboana amin'ny hopitaly any India, dia ity no e-Visa tokony hangatahanao. Visa fohy izy io ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana ny mpitsidika ao amin'ny firenena. Visa e-Medical Indiana dia koa Visa fidirana telo, izay midika fa afaka miditra ao amin'ny firenena in-3 ianao ao anatin'ny fe-potoana manankery.
Raha mitsidika ny firenena hiaraka amin'ny marary iray izay manaraka fitsaboana any India ianao, dia io no e-Visa tokony hangatahanao. Visa mandritra ny fotoana fohy ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana ny mpitsidika ao amin'ny firenena. 2 ihany Visa mpitsabo mpanampy dia omena amin'ny 1 Medical Visa, izay midika fa olona 2 ihany no afaka mandeha any India miaraka amin'ny marary izay efa nahazo na nangataka Visa Medical.
Fepetra takiana amin'ny Visa Indiana Online
ho olom-pirenena amin'ny firenena 1 amin'ny 165+ izay manana olom-pirenena mahazo ny Visa Indiana.
tsy maintsy manana pasipaoro manankery farafahakeliny 6 volana manomboka amin'ny datin'ny fahatongavanao any India. Ny pasipaoro dia tokony ahitana pejy 2 farafahakeliny.
raha mangataka Visa Indiana amin'ny Internet, ny antsipiriany omena dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ireo voalaza ao amin'ny pasipaoronao. Ny tsy fitoviana rehetra dia mety hiafara amin'ny fandavana ny famoahana visa na ny fahatarana amin'ny fanodinana/famoahana/fidirana visa any India.
Ireo mpangataka manana pasipaoro mety ho tapitra ao anatin'ny 6 volana manomboka amin'ny datin'ny fahatongavana any India dia tsy omena Visa Indiana Online.
Fitakiana antontan-taratasy an-tserasera Indiana Visa
Kopia elektronika na notarafina tamin'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoron'ny mpitsidika, izay tsy maintsy ny pasipaoro mahazatra, ary tsy maintsy manankery mandritra ny 6 volana farafahakeliny manomboka amin'ny datin'ny fidirana ao India, raha tsy izany dia mila manavao ny pasipaoronao ianao. Vakio ny momba ny Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa.
Dika mitovy amin'ny sary miloko miloko pasipaoro vao haingana nataon'ny mpitsidika (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny finday). Vakio ny momba ny Fangatahana sary India Visa.
Adiresy mailaka miasa, ary carte de crédit na carte de crédit ho fandoavana ny saram-pandraharahana.
(tsy voatery) tapakila fiverenana na hivoaka ny firenena.
(Tsy voatery) Fepetra manokana amin'ny karazana e-Visa angatahinao.
Ankoatra ny fanomanana ireo antontan-taratasy takiana amin'ny Indian Visa Online dia tokony ho tsaroanao ihany koa fa zava-dehibe ny mameno ny Fangatahana fangatahana Indiana Visa ho an'ny e-Visa Indiana miaraka amin'ny fampahalalana mitovy amin'ny aseho amin'ny pasipaoronao izay hampiasainao hivezivezy any India ary hampifandray amin'ny Indian Visa Online anao.
Mariho fa raha manana anarana afovoany ny pasipaoronao dia tokony hampidirinao ao amin'ny endrika e-Visa indiana an-tserasera amin'ity tranokala ity. Ny governemantan'i India dia mitaky ny anaranao dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny fangatahanao e-Visa Indiana araka ny pasipaoronao. Anisan'izany ny:
Azonao atao ny mamaky amin'ny antsipiriany momba Fepetra takiana amin'ny e-Visa Indiana
Ny olom-pirenen'ny firenena voatanisa etsy ambany dia afaka mangataka amin'ny Indian Visa Online
Torolàlana amin'ny dingana amin'ny fangatahana Indiana Visa Online (na Indian e-Visa)
1. Fangatahana Visa Indiana feno: Raha te hangataka Indian Visa Online dia mila mameno taratasy fangatahana tena tsotra sy mahitsy ianao. Mila mampihatra farafahakeliny 4-7 andro alohan'ny daty hidiranao any India ianao. Azonao atao ny mameno ny Fangatahana fangatahana Visa any India amin'ny Internet. Alohan'ny fandoavam-bola dia mila manome ny mombamomba anao manokana ianao, ny antsipirian'ny pasipaoro, ny toetra ary ny antsipirian'ny heloka bevava taloha.
2. Mandoa vola: Manaova fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny vavahady fandoavam-bola azo antoka amin'ny PayPal amin'ny vola 100 mahery. Azonao atao ny mandoa vola amin'ny alàlan'ny carte de crédit na debit (Visa, Mastercard, Amex, Union Pay, JCB) na kaonty PayPal.
3. Ampidiro ny pasipaoro sy ny antontan-taratasy: Aorian'ny fandoavam-bola dia angatahina ianao hanome fampahalalana fanampiny mifototra amin'ny tanjon'ny fitsidihanao sy ny karazana Visa izay angatahinao. Hampiakatra ireo antontan-taratasy ireo ianao amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka alefa amin'ny mailakao.
4. Raiso ny fankatoavana ny fangatahana Visa Indiana: Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny fanapahan-kevitra momba ny Visa Indiana anao dia ho raisina ao anatin'ny 1-3 andro ary raha ekena ianao dia hahazo ny Indian Visa Online amin'ny endrika PDF amin'ny alàlan'ny mailaka. Amporisihina ny hitondra printy ny e-Visa Indiana miaraka aminao any amin'ny seranam-piaramanidina.